トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Inona no tokony caching ianao tamin 'ny fotoana mba nindram-bola
Tao anatin'ny taona vitsivitsy ny unmanned fifanarahana lasa Mitsukareru milina toy izany na aiza na aiza ao an-tan?na, caching fampiharana ny tsy maintsy ho afaka mora foana noho ny teo aloha.
tsy isaky ny ilaina mba hanao ny fomba teo amin'ny latabatra, noho ny fanontaniana sy ny valiny fivoriana ny antontan-taratasy sy ny lamin 'ny minitra vitsivitsy izay efa voatondro mazava, satria iza no hamerina ny mahamety amin' mampisambotra. Izany hoy
, ho an'ny olona izay mihevitra miezaka ny hampiasa voalohany unmanned fifanarahana milina, inona no karazana antontan-taratasy takiana, dia mety koa inona no tsy mahalala na mahazo aina ny fanadinana dia tanterahina amin'ny fomba.
Koa amin'ity indray mitoraka ity, dia hampahafantatra izay ilainao amin'ny fotoana caching fampiharana.
famantarana antontan-taratasy takiana
Raha toa ianao ka mpanjifa caching fitantanam-bola, sns, ny voalohany dia famantarana ilaina dia ny antontan-taratasy.
ny antontan-taratasy famantarana, dia manondro ny
? daty nahaterahana
reliably namariparitra ny karatra maha-ofisialy, dia olona ankapobeny, ny fahazoan-d?lana ny mpamily na ny pasipaoro, sns Ary ho tahaka.
tamin'ny fotoana na fangatahana, dia mila izay mahay reliably manamafy fa tsy misy fahadisoana ao amin'ny vaovao.
Ankoatra izany, antontan-taratasy famantarana Tsy asaina manaiky tany am-boalohany, fototra ny fanontam-pirinty, ary atolotra toy izany mainty sy fotsy dika mitovy. Ao
rehefa ampiasaina matetika indrindra mpamily ny fahazoan-dalana, mariho tsara fa tsy maintsy manana ny dika mitovy ny andaniny sy ny ankilany eo amin'ny raharaha izany.
ny hafa, inona no azo ampiasaina ho famantarana antontan-taratasy, pasipaoro sy ny toy izany.
tsy misy, ary efa niala aina izy ireo, satria misy mety izay heverina ho tsy manan-kery famantarana antontan-taratasy, ny fanamafisana ny fe-potoana Aoka isika tsy hanadino.
Inona no ilaina amin'ny toe-javatra sasany
amin'ny ankamaroan'ny ny mpanjifa ara-bola, no hampiharantsika ny caching famantarana raha toa misy antontan-taratasy sy ny tombo-kase.
, na izany aza, ary raha ny misambo-bola ny orinasa mindrana, izay misy maro, tao an-raharaha ny caching ny fitambaran'ny vola mihoatra iray, dia tsy manana, fara fahakeliny, izay ilaina mba hampisaraka fidiram-bola porofo.
fidiram-bola taratasy fifandraisana, fa ny nisambo-bola, dia ny zavatra ho an'ny anankiray amin'ny hamaly afaka hitsena ny tapa-kevitra.
lavo dia tena payslips ary tsy fandoavana taratasy kely, ao an-karama famaritana, mba hanaporofoana fa ny fidiram-bola marin-toerana ianao, dia mety ho asaina manaiky hiara, toy ny teo aloha ny roa volana.
caching sasany nanan-talenta amin'ny zavakanto, satria mety solointsika maranitra na dia ao anatin'ny toy ny vola taratasy sy ny hetra filazana, hanatanterahako ny malamalama fifanarahana mba tsy raiki-tahotra sy hitandrina foanana koa ny fifanekena fomba mialoha ny asa sy nanan-talenta amin'ny zavakanto.
ny raharaha ny olona izay miasa ho toy ny hany tompon'ny maimaim-poana na lefona, porofo fidiram-bola no ho fanapahan-kevitra tatitra. Fa raha nanambara fahampiam
taona teo aloha, dia tsy latsa-danja ny raharaha fa lasa sarotra nindrana.
Ny antony fa ity no mamaritra ny sisin-tany fa tsipika ny caching vola, izay ny tontalin'ny lal?na.
araka izany lal?na izany, mindrana mihoatra ny iray ampahatelon'ny vola miditra isan-taona lasa rafitra izay tsy azo tanterahina, dia vola miditra dia lasa tsy azo inoana ho toy ny fandinihana ny fahamarinan-toerana fa tsy hany proprietorship dia caching.
Raha hisambotra mihoatra noho ny
ampitahaina amin'ny ara-dal?na nindrana, raha sonia ho caching bebe kokoa, misy ny fomba ampiharana ny findramam-bola izay antoka ny Real Estate.
an-trano na ny birao, no azo ampiasaina, raha misy sy ny tany hafa. Vola izay mety ho
nindrana koa, Ho fanajana ny tombany ny tena toetrany dia ho afaka hampiasa ny 50% amin'ny 70%.
collateralized fampindramam-bola ny tena toetrany, ankoatry ny antontan-taratasy famantarana manokana sy ny fidiram-bola taratasy, dia mila famantarana antontan-taratasy tena toetrany, toy ny taratasy fanamarinan-zavatra voasoratra anarana.
Ankoatra izany, fifanarahana, na izay ilaina, rehefa fampiharana ny tsat?ka, dia aoka ny Mariho fa ilaina ny ho vonona ny fampiharana endrika.
caching mindram-bola Tsy maintsy manana antontan-taratasy fanazavana ny olona afaka mahita.
ho famantarana ho an'ny tahirin-kevitra izany, hanao ny manaiky ny famantarana ianao dia afaka mahita ny adiresy sy ny daty nahaterahana.
mba manaiky na dika mitovy, anjara pirinty Andeha isika raha niomana tsara ka tsy ho mahia.
hisambotra raha misy vola bebe kokoa, eo amin'ny tranga ny maro ny caching, dia zava-dehibe ny handao hanomana ny antontan-taratasy mba hanaporofo ny fidiram-bola fanampiny. Ho an'ny olona izay manao ny raharaham-barotra ao amin'ny
olona, ??ny hetra hiverina ianareo mba mahafantatra Ilay ketra tamin'ny taona varotra sy ny tombony ho takiana ho fidiram-bola taratasy.
misy tapaka fidiram-bola, aoka isika hanao fanekena toy ny porofo ny fahafahana handoa.
Ankoatra izany, mpanjifa fitantanam-bola, eo amin'ny raharaha izay te-hametraka vola hanofa milamina tsara, no nanolorana azy ho hanatanteraka ny caching ao amin'ny tena toetra hiantoka.
nataony toy ny tsat?ka ny trano, toy ny birao na an-trano, nindrana azo atao, na ny na na tsia eo amin'ny lafiny fikajiana ny Real Estate sarobidy: Tanteraka ireo. Antontan-taratasy mba ho atolotra
maro, mandra-fandinihana dia vita dia zava-dehibe ny manana ny sisiny ny fotoana.